Dagaallo cul-culus oo Muqdisho ka dhacay Maanta iyo AMISOM oo la sheegey in ay ka qeyb gashey. [Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho, July 12- Warar hoose oo aannu ka heleyno ilo-wareedyo rasmi ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ay ku soo warramayaan in dagaal xooggani saaka uu ka qarxey magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, dagaalkaas oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahi ay ka qeyb galeen ciidamada AMISOM.
Dagaallada saaka dhacay ayaa ay sababeen khasaaro dhimmasho oo laxaadle iyada oo tirada dhimashada ay gaartey halkii ugu sarreysey, waxaa lagu soo warramayaa in 23 Qof oo dhinacyadii dagaallamayey iyo dad rayad ah ay ku dhinteen iyada oo Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo Xaafadda Cali Kammiin ay ku dhaceen Madaafiic xooggan.
Dhinaca kalena Saraakiisha caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in ay buux dhaafiyeen Cisbitaalka Madiina dhaawacyo aad u badan ku waas oo ku soo waxyeelloobey Madaafiic iyo Rasaas ay isu adeegsanayeen garabyadii dagaallamayey Shaley iyo Maanta.
Dadka ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan halka dagaalladu ay ka dhaceen ayaa waxaa ay sheegeen in ay arkayeen ciidamada AMISOM oo saaka ka soo ruqaansadey barahii ay ku sugnaayeen iyaga oo dagaalkana ka qeyb galey.
Waxaase ay ku soo warramayaan qaar ka tirsan Saxaafadda gudaha in Ciidamada AMISOM ay gebi ahaanba ay beeniyeen wararka sheegaya in ciidamada AMISOM ay ka qeyb qaateen dirirtii dhacdey maanta.
Xaaladda Muqdisho ayaa iminka wali waxaa laga dareemayaa xiisad colaadeed waxaana ay dagaalladu ay ka qarxi karaan goobihii shaley iyo Saaka ay dagaalladu ay ka dhaceen oo ka tirsan degmada Cabdulcasiis halkaas oo ay isku hor fadhiyaan dhinacyada is mucaaradsan.
Waxaana saaka Degmada Cabdulcasiis xilli hore ka bilawdey dagaal inkasta oo markii danbe uu iskii u qaboobey.
Waxaana degmooyinka Shibis, Boondheere iyo Cabdulcasiis ay dhammaantoodba yihiin deegaannada ay ka dhaceen dagaallo goos goos ah subaxnimadii Saaka inkasta oo aysan haatan ka jirin dagaallo.